true study /zu-ZA/tools-for-life/study/steps/removing-the-first-block-to-learning.html read 1 8 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/study_zu_ZA.jpg UbuChwepheshe BokuTadisha
Uyemukelwa kwi-Online Course yobuChwepheshe bokuTadisha
Ubuchwepheshe busho izindlela zokusebenzisa ubuciko noma isayensi—indlela yokwenza okuthile, hhayi ukwazi ubuciko noma isayensi uqobo.
NgobuChwepheshe bokuTadisha, uzofunda ukuthi ungakwenza kanjani futhi uphumelele ekutadisheni.
Futhi kufanele wazi ukuthi ungatadisha kanjani ukuze uphumelele empilweni. Uma ungakwazi ukutadisha, awukwazi ukufunda futhi uma ungakwazi ukufunda, awusoze wathuthuka. Futhi ngaphandle kokwenza ngcono, angeke uthole impumelelo eningi kulokho okwenzayo.
Kepha uma wazi futhi usebenzisa ubuchwepheshe bokutadisha, ungaphumelela ngokwengeziwe, uthuthukise ukuphepha kwakho kwezezimali futhi uthokoze kunoma yini oyenzayo.
Umhlaba uyaqhubeka nokuthuthuka kunezindlela ezintsha zokwenza izinto, futhi izindlela ezisheshayo nezisebenza ngemfanelo ukufeza imigomo. Lokukhula kwentuthuko kwenzeka emhlabeni wonke, nsuku zonke.
Ukuze uhambisane nalelijubane futhi uhlale wazi ngokusha okutholakele emhlabeni, kufanele ukwazi ukutadisha futhi-, ufunde.
UbuChwepheshe bokuTadisha, obaqaliswa ngu-L. Ron Hubbard, ubuchwepheshe obuqondile, obusebenzayo, sebusize izigidi zabantu zaphumelela kakhulu empilweni.
I-block yokuqala (into evimbela inqubekela phambili) engakuvimbela ukuthi ube ngumfundi ophumelelayo kunoma yisiphi isifundo ukuzimisela ukuthola ulwazi.
Leli yisango lokuqala okumele livulwe ukuqala noma yisiphi isifundo ngoba uma leli sango lihlala livaliwe, lizokuvimbela ukuthi ungakwazi ukuqonda noma yini ozama ukuyifunda. Kufanele uzimisele ukufunda futhi uthole ulwazi ngezinto ongazazi.
Uma ufunda isifundo ocabanga ukuthi vele wazi konke ngaso, uzozifaka otakwini. Esikhundleni sokuyifunda ukuze ufunde okuthile okusha, nokuyiqonda, uzongena ezintweni ezinjengokuzama ukufunda izinto ezikhona igama ngegama ngaphandle kokuziqonda. Uzongena ekubambeni ngekhanda ukuze ungazikhohlwa nezinye izinto ezimangalisayo kanjalo. Azikho kulezi zinhlelo noma izindlela zokwenza izinto ezengeza kunoma yiluphi ulwazi futhi azikwenzi ube nekhono ngokwengeziwe.
Ukuze ukwazi ukutadisha isifundo, kufanele uzimisele ukusifunda ukuze uthole ukuthi yini okufanele ifundwe.
Uma uqala isifundo ngombono wokuthi vele usuyazi ngalesi sihloko futhi ucabanga ukuthi wazi konke okushiwo ngaso, ukusifunda kungaba ukuchitha isikhathi. Kungani uchitha isikhathi sakho wenza sengathi ufunda okuthile uma kuwukuthi usunqume ukuthi usuyazi ngakho konke? Uma wenza lokhu, ungenza sonke isihloko sokufunda sisinde kwehlela.
Lokhu akusho ukuthi kufanele ungazinaki izinto ozaziyo ezinokukusiza kakhulu. Kudingeka ulwazi lokwahlulela kancane ukuba nekhono lokubheka isifundo esithile futhi wazi ukuthi yini oyaziyo nokwazi ongakwazi ngaso. Kepha kungenziwa.
Ungazitshela ukuthi, “Hhayi nokho, kunezingxenye zalokhu engingazi lutho ngazo kuzofuneka ngibheke bese ngifunda konke lokho okufanele ngazi ngakho.” Uma usungakwenza lokhu, unqobe isithiyo sokuqala sokufunda.
Loko okubalulekile yilokhu: Ukukwazi kwakho ukufunda kuncike ekuzimiseleni kwakho ukufunda.
Futhi: I-block eyodwa enkulu kakhulu yokufunda yisinqumo sakho sokuthi usuvele wazi konke ngakho.
Lona umnyango okufanele uwubhodloze uvuleke.
Futhi uma usuwubhodlozile lowo mnyango usuvulekile, ungafunda noma yini ukusuka lapho, nokusebenzisa ubuChwepheshe bokuTadisha.